कथा : लिपिस्टिकको दाग – MySansar
ऊ लुगामा साबुन दल्दै थिई । उसका आँखा, श्रीमानलाई मनपर्ने कमिजमाथिको दागमा प¥यो । त्यहाँ, ओठको बान्की देखिने गरी रातो लिपस्टिकको दाग लागेको थियो । त्यसरी लिपस्टिकै लाग्ने गरी ऊ श्रीमानसँग कहिल्यै टाँसिएकी थिइन । उसलाई झनक्क रीस उठ्यो । पछिल्लो पटक उनले त्यो कमिज कहिले लगाएका थिए, उसले सम्झन खोजी तर सकिन । लुगा धुने उसको मूड राम्रैसँग बिग्रियो । मन नलाई नलाई लुगा धुन सिध्याई । दिमाग कमिजमाथिको लिपस्टिकको दागमा रूमल्लिरह्यो । उसको श्रीमान्को अर्की महिलासँग घनिष्ठता भएको उसलाई थाहा थिएन, न त कसैबाट त्यस्तो सुइँको नै पाएकी थिई ।
‘त्यस्ता कुरा के बताउँथे र ?’ ऊ साह्रै आहत भई । राती श्रीमान्सँग बोलिन पनि ।
‘हैन, के भो, किन नबोलेकी ? बिहानसम्म त ठीकै थियौ, कि सन्चो भएन ?’
‘लुगामा लिपस्टिक दल्नेलाई नै सोध्नुस् न ।’
‘कस्तो लिपस्टिक ? कोसँग सोध्ने ? के भन्छौ ?’ श्रीमान्ले कुरै बुझेनन् ।
‘नाटक पनि कस्तो ! आफ्नो कमिजमा लागेको दाग पनि थाहा छैन ? हैन, त्यसरी पछाडि लिपिक्कै टासिँदा पनि तपाईलाई पत्तो भएन ? कि आफै बन्यो लिपस्टिकको दाग ?’ ऊ कुरा सुन्ने मनस्थितिमै थिइन । श्रीमान्ले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ऊ सन्तुष्ट भइन ।
‘लोग्ने मान्छेका के विश्वास ? घरमा एउटी, बाहिर दसौटी, तैपनि चोखै बन्न खोज्छन्’ ऊ भुत्भुताई । रीस तातै थियो, हत्पति के ओर्लिन्थ्यो ? उसको मौन ब्रत सुरू भइहाल्यो ।
भोलिपल्ट खानापछि रीसैरीसमा कालो रङको लिपस्टिक लाएर ऊ साथीको घर जान निस्की । माइक्रो बसमा ठेलमठेल भीड थियो । तै एउटा केटोले ठाउँ दियो, ‘दिदी यता बस्नुस्, म ओर्लँदैछु ।’
चेप्टिँदै बल्लबल्ल बस्न सकी ऊ । उसलाई ठाउँ दिने केटा माइक्रोबाट ओर्लेर सडकपेटीमा उभियो । उसले गाडीको झ्यालबाट हेरी । केटा घडी हेर्दै थियो । झट्ट उसका आँखा केटाको बाहुलामा लागेको कालो दागमा प¥यो । त्यो उसको आफ्नै गाढा लिपस्टिकको ओठे छाप थियो।
5 thoughts on “कथा : लिपिस्टिकको दाग”
Bijesh Lal amatya says:
Very nice artical/story
कति छोटोे, कति मिठो ।
Kasto chhoto mitho katha! Malai Sushma ji ko katha dherai ramro lagchha
छोटो तर रोमान्चक कथा. मैले नबूजेको यौटा कुरा, हरेक आइमाईलाई लिपस्टिकले ओठ पोत्नु पर्ने ( रहर हो कि बाध्यता) चाही किन? आइमाई को ओठ लिपस्टिक बिना नराम्रो हुन्छ र? कृपया कसैले बुझाई दिनु हुन्छ कि ?